स्वास्थ्य | BCM Nepal
यी दुई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भत्ता !
3 months ago by bcmnepalस्वास्थ्य
पोखरा । बेल्जियमबाट चैत ४ गते नेपाल आएकी बागलुङकी अंशु सापकोटालाई कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि धौलागिरि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनी २८ दिन अस्पताल बसेर निको भई १२ वैशाखमा घर फर्किइन्। अस्पताल बसिरहेको १२ दिनपछि चैत २७ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले अंशुलाई फोन गरी… Read More
यो पढेपछि तपाइले कहिल्यै फ्याक्नुहुनेछैन केराको बोक्रा !
5 months ago by bcmnepalस्वास्थ्य
काठमाडौं । केरा खाएर यता उता बोक्रा फाल्ने तपाईको बानी छ भने त्यसलाई बदल्नुहोस । किनभने केराको बोक्रामा भरपूर मात्रामा पोषक तत्व र कार्बोहाइड्रेट हुन्छ । विशेषज्ञका अनुसार केराको बोक्रालाई पिसेर त्यसको पेस्ट दुखेको ठाँउमा १५ मिनेटसम्म लगाएर राख्नाले टाउको दुखेको निको हुन्छ । रगतको… Read More
भुलेर पनि नगर्नुस् यस्ता काम, मिर्गौला खराब हुनसक्छ !
6 months ago by bcmnepalस्वास्थ्य
काठमाडौं । किडनी अर्थात मृगौला शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो । यसले शरीरमा रगत सफा गर्ने देखि, हार्मोन बनाउने, खनिज सोक्ने, मुत्र उत्पादन गर्ने, टक्सिन अर्थात खराव पदार्थहरुलाई शरीरबाट निकाल्ने तथा एसिडको सन्तुलन बनाउने जस्ता काम गर्छ । यहाँ हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने… Read More
जेनेभा । बिहीबार विभिन्न ७ देशमा कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को पहिलो संक्रमण देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लुएचओ)ले सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई तयारीका लागि चेतावनी दिएको छ । ‘प्रत्येक देश पहिलो केसका लागि तयार हुनैपर्छ,’ बिहीबार जेनेभामा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डब्लूएचओका महानिर्देशक ट्रेडस एड्हानोम गेहब्रेयससले भने, ‘कुनै पनि मुलुकले… Read More
काठमाडौं । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका– १ र २ अन्तर्गत रहेको कुम्लिङ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छ महिनादेखि बन्द रहेको छ । साविक ताक्ला, बाम्टा, ठेहे, बैजिबाडा, दोजामलगायत बासिन्दाले देउसीभैलो खेलेर जम्मा गरेको रु एक लाखले जग्गा खरिद गरी भवन बनाएका थिए । २०७२ सालमा सो एकाइ… Read More
किन बढ्दैछन् क्यान्सरका बिरामी ?
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठ हरेक दिनजसो चिकित्सकहरूसँग परामर्श गर्छन् । आधा घण्टाको परामर्शमा आध्यात्मिक कुरा गर्छन् । सहकर्मीलाई उत्पे्ररित गर्दै भन्छन्, ‘बिरामीको उपचार गर्नु नै धर्म हो । मन्दिर गएर भन्दा बिरामीको उपचार गर्दा बढी धर्म कमाइन्छ ।’ क्यान्सर बिरामीको… Read More
घाम झुल्केपछि मात्र मर्निङ वाक
काठमाडौं । मर्निङ वाक गर्ने क्रममा सडकमा बिहानै कुद्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस् तपाईंको व्यायाम गर्ने शैलीले शरीरलाई हानि गर्न पनि सक्छ। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मी जाडो मौसममा बिहानै मर्निङ वाकमा ननिस्कन सुझाव दिन्छन्। उनका अनुसार चिसो मौसममा वायुमण्डलको बाहिरी भागमा हानिकारक धुलोका… Read More
हात्ती पाइलेविरुद्धको औषधि निर्धक्क सेवन गरौंँ
बाँके । यहाँका चिकित्सकले हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि निर्धक्कसँग सेवन गर्न आग्रह गरेका छन् । बाँके जिल्लामा माघ २५ देखि २७ गतेसम्म हात्ती पाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाइँदैछ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कूल एकलाख ७३ हजार ७९४ जनसङ्ख्यामध्ये एकलाख ४५ हजारले यो औषधि सेवन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ… Read More
जाडो मौसममा किन बढी डिप्रेसन ?
काठमाडौं । आजका पुस्तामा डिप्रेसन एक ठूलो रोगको रुपमा विकास भएको छ । यस्ता धेरै कम व्यक्ति भेटिन्छन् जो डिप्रेसनको शिकार बनेका हुँदैनन् । डिप्रेसन धेरै किसिमको हुन्छ । तीमध्ये विन्टर ब्लुज जाडोमा हुने डिप्रेसन हो । जाडो मौसम नजिक भएसँगै अझै डिप्रेसनका बिरामी बढ्ने… Read More